Fifidianana · Mey, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Mey, 2009
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Mey, 2009
Iran: ex-mpiambina revolisionera mirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena mampiasa aterineto kely
Iràna 21 Mey 2009
Anisan'ny efatra tsara vintana nofantenan'ny filan-kevitry ny mpiambina revolisionera any Iran ny mpitarika revolisionera tany Iran teo aloha Mohsen Rezai hifaninana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena hotontosaina ny 12 jona ho avy izao. Maivana ny fampielezankevitra an-tseraseran'i Rezai mitaha amin'ny an'ireo telo hafa mifaninana aminy, saingy vitany lisitra ao amin'ny vohikalany fanaovany propagandy ny anaran'ireo mpamaham-bolongana manohana azy.
India 16 Mey 2009
Ity lahatsoratra ity dia tafiditra ao amin'ny Fitantarana manokan'ny Global Voices ny fifidianan'ny Karana Indiana 2009 Tonga avokoa ny valim-pifidianana avy any amin'ny vazantany efatra any India ary dia mazava fa nisafidy mazava ny governemantan'ny hery afovoany marintoerana, eo ambany fitarihan'ny UPA ao amin'ny Kongresy ity firenena ity. Ho fanindroany...
Iràna 14 Mey 2009
India 05 Mey 2009
Ny vaikan'ireo olo-malaza mandritry ny fifidiana Indiana
India 02 Mey 2009
Salman Khan (eo afovoany), mpanakanto avy ao Bollywood, manohana ny kandidà Milind Deora nandritra ny fivondronana tany Mumbai Sarin'i Al Jazeera English ary nampiasaina teo ambanin'ny creative commons license. Any India, manana dindo goavana ny mpilalao sy ny mpamokatra sarimihetsika ary noporofoin'i Danny Boyle izany tao amin'ilay sarimihetsika Slumdog Millionaire...